Codbixin Uu Wargayska Marca Ka Sameeyay Kooxda Uu Antoine Griezmann Uu Ku Biiri Doonto Oo Si Buuxda Loogu Saadaaliyay In Uu Barcelona Ku Biiri Doono. – WWW.Gool24.net
Wargayska Marca oo ka soo baxa caasimada dalka Spain ee Madrid ayaa codbixin uu ka sameeyay mustaqbalka xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann waxa uu akhristayaashiisa waydiiyay halka uu xidiga ree France uga bixi doono garoonka kooxdiisa ee Estadio Wanda Metropolitano. Griezmann ayaa la fahansan yahay in dhamaadka xili ciyaareedkan uu ku biiri doono mid ka mid ah kooxaha waa wayn ee Yurub.
Kooxaha Manchester United, Barcelona iyo PSG ayaa ahaa kooxaha inta ugu badan lala xidhiidhinayay Antoine Griezmann laakiin codbixinta uu wargayska Marca sameeyay ayaa muujinaysa in xidiga ree France uu ka soo muuqan doono shaxda kooxda Barcelona xili ciyaareedka soo socda.
Jamaahiirta kooxda Atletico Madrid ayaa Griezmann ku oriyay markii badal looga saaray ciyaartoy Madrid Derby ee kulankii Estadio Wanda Metropolitano laakiin waxay markale taageero u muujiyeen markii uu kooxdooda guul ku hogaamiyay kulankii xalay ee AS Roma.
Akhristayaashii ka qayb qaatay codbixintan ayaa boqolkiiba 51% aaminsan in Griezmann uu ku biiri doono Barcelona taas oo ah cod aqlabiyad ah isla markaana muujinaysa in xidig ree France uu Camp Nou ka soo jeedsan karo laakiin boqolkiiba 29% dadkii codkooda dhiibtay ayaa aaminsan in Griezmann uu xagaaga ku biiri doono kooxda Manchester United ee xagaagii hore sida wayn u doonaysay.
Boqolkiiba 8% kaliya ayaa dadkii codbixintan ka qayb qaatay aaminsan in Griezmann uu dib ugu laaban doono horyaalka dalkiisa France oo uu PSG ku biiri doono waxayna PSG noqotay kooxda saddexaad ee uu Griezmann ku biiri karo sida laga fahmi karo codbixintan.
Boqolkiiba 5% ayaa aaminsan in Griezmann uu markale badali doono maankiisa oo uu ku sii nagaan doono kooxdiisa Atletico Madrid laakiin cod la mid ah oo boqolkiiba 5% ah ayaa aaminsan in kooxo kale oo aan ahayn Barcelona, Man United, PSG iyo Atltico Madrid uu ku biiri karo xidiga ree France.
Ugu danbayn boqolkiiba 2% dadkii codbixinta kaga qayb qaatay wargayska Marca ayaa aaminsan in Griezmann uu ku biiri karo kooxda horyaalka Germany ee Bayern Munich. Si kastaba ha ahaatee, Greizmann ayaa la aaminsan yahay inuu qaadanyo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Atletico Madrid.
Kooxaha Barcelona, Manchester United iyo PSG ayaa sida codbixintan ka soo baxay ah kooxaha ugu cad cad ee heli kara saxiixa xidiga ree France laakiin kooxaha Yuru ugu waa wayn oo dhan ayaa la fahansan yahay in ay ku dagaalami doonaan haddii ay xaqiiq noqoto in uu baxayo.